🍒Casino FastPay - Goobta Rasmiga ah, Diiwaangelinta, Gunooyinka 2021
Ku saabsan Shirkadda FastPay
FastPay Casino >Khadka Tooska ah ee 'FastPay Online Casino' - Boosaska ugu Fiican iyo Bixinta Degdegga ah ee Hal Meel
Khadka Tooska ah ee 'FastPay Online Casino' - Boosaska ugu Fiican iyo Bixinta Degdegga ah ee Hal Meel
Dib u eegista Websaydhada Rasmiga ah ee FastPay
Noocyo kaladuwan oo mashiinnada lagu ciyaaro ee FastPay
Gunooyin iyo dalabyo dhiirrigelin ah oo loogu talagalay macaamiisha FastPay
Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Online Casino' FastPay waa mashruuc khamaar oo da 'yar oo ay soo bandhigtay Dama N.V. Qaar badan oo casinos caan ah ayaa ka hoos shaqeeya maamulkeeda. FastPay wuxuu leeyahay rukhsad caalami ah oo ay soo saartay Guddiga Curacao Gaming. Khadka tooska ah ee tooska ah waxaa si joogto ah looga hubiyaa daacadda wuxuuna adeegsadaa mashiinno si gaar ah ruqsad loogu siiyay. Mashruucu wuxuu diiradda saarayaa adeegga tayada leh iyo lacagaha degdegga ah.
Goobta ugu weyn ee khamaarka wuxuu ku yaalaa aagga aagga COM. Wadamada qaar waxay ubaahanyihiin mashaariic khamaar oo caalami ah si ay uhelaan rukhsad maxali ah, hadii kale goobahooda waa la xayiray. Si looga gudbo xayiraadaha noocaas ah, waxaa jira muraayad FastPay - tani waa degel dheeri ah oo aan ka duwaneyn midka ugu weyn xagga shaqeynta iyo isku xirnaanta. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin waa bogga.
Goobta FastPay waxaa lagu sameeyay midabbo madow. Kaliya badhannada iyo cayaaraha ayaa leh naqshad dhalaalaya. Liiska kore waxaa matalaya tabs:
"Nagu saabsan" - waxaa ku jira macluumaad ku saabsan casino;
"Taageero" - waxay kuu oggolaaneysaa inaad uga tagto codsi adeegga taageerada;
"Lacag-bixinnada" - nidaamyada lacag-bixinta ee la taageeray, xaddidyada dhigaalka iyo ka-noqoshada ayaa lagu muujiyey halkan;
"Promo" - qaybta waxaa lagu soo bandhigayaa macluumaad ku saabsan dallacsiinta hadda, gunnooyinka, shuruudaha helitaankooda;
"Tartamada" - khamaarka wuxuu si joogto ah uqabtaa tartamo udhaxeeya macaamiisheeda, qeybta waxaad kaheli kartaa macluumaad kusaabsan tartamada hada socda iyo kuwa mustaqbalka.
Xagga sare sidoo kale waxaa ku yaal foom galitaan, badhan si loo furo daaqadda diiwaangelinta. Geeska kore ee midig waxaa ku yaal badhan lagu dooranayo luqad. Isku xirka waxaa loo turjumay afafka Ruushka, Ingiriiska, Jarmalka, Yukreeniyaan, Polish, Finnish, Isbaanish, Czech, Jabbaan, Malaay, Faransiis, Noorweey, Turki. Calanka macluumaadka ayaa ku fadhiya qayb muhiim ah oo ka mid ah bogga weyn. Halkan waxaa lagu daabacay dalabyo xayeysiin ah, macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan shaqada qamaarka.
Calanka hoostiisa waxaa jira xiriiriyeyaal qaybaha waaweyn ee khamaarka, waxaa ku yaal lobb ciyaaro leh mashiinno naadi iyo ciyaaro kale. Dhammaan boosaska waxaa lagu tijaabin karaa qaab bilaash ah - diiwaangelin looma baahna.
Qeybta hoose ee bogga casino ee FastPay waxaa ku yaal menu tixraac ah, oo ku xiraya qaybaha macluumaadka sharciga ah. Waa qasab in la darso shuruucda iyo xaaladaha ciyaarta ka hor inta aan la is diiwaan gelin.
Markaad booqanaysid barta qalabka mobilada, isdhexgalka wuxuu si toos ah ulaqabsadaa cabirka shaashadda. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka ciyaarto kaniini aad jeceshahay khamaar, taleefan casri ah oo leh raaxada ugu badan.
Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'FastPay online casino' wuxuu bixiyaa 24/7 taageero macaamiil Waad codsan kartaa caawimaad wakhti kasta oo maalinta ka mid ah. Taageerada farsamada waxay ka caawisaa diiwaangelinta, xisaab celinta, iwm.
Kasiinadu waxay bixisay dhowr wadiiqadood oo xiriir ah:
wada sheekaysiga khadka tooska ah - waxaa loogu yeeraa badhanka menu u dhigma, waxay ku yaalliin geeska midig ee hoose ee goobta;
tigidh - waxaad ku abuuri kartaa tigidh adoo adeegsanaya badhanka"Taageerada" ee ku yaal liiska ugu sarreeya;
iimayl - waa inaad rafcaan u dirtaa oo keliya xiriirada lagu muujiyey websaydhka casino.
Kahor intaadan la xiriirin adeegga taageerada, waxaa lagugula talinayaa inaad tagto qaybta Su'aalaha la Isweydiiyo. Horay waxaa ujiray jawaabo su'aalo caan ah halkan.
Soo booqdeyaasha goobta waxay ogaadaan jawiga wanaagsan ee goobta rasmiga ah iyo meesha ku habboon ee ay ka kooban tahay dhismayaasha waaweyn ee shaqeynaya. Boodhadh dhalaalaya ayaa midba midka kale beddelaya, oo muujinaya martida iyo xubnaha ka diiwaangashan FastPay Casino naadiga dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale kicinta xiisaha waxa ka dhacaya derbiyadeeda is-dhexgalka ah.
Bogga ugu weyn wuxuu ka kooban yahay badhamada diiwaangelinta, badhamada soo galitaanka iyo tabsyada menu. Isku xirnaanta macquulka ah ayaa u sahlaysa xitaa bilowga inay maraan. Khamaarayaasha ka kala yimid dalal kala duwan ayaa dareemi doona raaxo boggeeda, maxaa yeelay waxaa loo habeeyay tiro badan oo luqado kala duwan ah:
Isbaanishka, Iswidishka, Noorway, Finnishka, Malay, Kazakh, Turki, Faransiis, Czech, Jabbaan iyo kuwo kale oo badan ayaan sidaa u khusayn.
Qaabka goobta rasmiga ah ee Fastray waxaa lagu kala saaraa midabbo dhalaalaya, sidaa darteed way faraxsantahay. La'aanta macluumaad aan loo baahnayn iyo naqshad qurux badan ayaa kuu oggolaanaysa inaad si dhakhso leh uga baxsato dhibaatooyinka maalinlaha ah, adoo madaxaaga u galaya noocyo badan oo madadaalo khamaar ah. Macaamiil maaliyadeed oo ka socda FastPay casino
Kasiinadu waxay bixisaa siyaabo badan oo lacag dhigasho iyo kala noqosho ah. FastPay wuxuu la shaqeeyaa lacago badan oo kala duwan, oo ay kujiraan cryptocurrencies - EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC. Macaamiil kasta oo cusub waa inuu doortaa lacagta aasaasiga ah ee koontada waqtiga diiwaangelinta. Haddii dhigaalka dambe lagu sameeyo lacag ka duwan, ka dib beddelaad otomaatig ah ayaa la samayn doonaa.
Inta badan dhigaalka ku jira FastPay waxaa lagu xisaabiyaa bilaa xisaab, marka laga reebo jeebka elektarooniga ah ee WebMoney. In ka badan 80% kiisaska, lacagta ayaa isla markiiba lagu shubaa koontada - isla markaaba ka dib markii la qaddariyo ciyaaryahanka ayaa sharad geli kara. Hababka loo maalgeliyo koontadaada:
kaararka bangiga - Visa, Maestro, Mastercard;
boorsooyinka e-boorsooyinka - EcoPayz, Neteller;
foojarro - EcoVaucher iwm.
Guud ahaan, casino wuxuu bixiyaa 18 ikhtiyaar deebaaji. Xuduudaha buuxinta waxaa lagu kala saaray daacadnimo, waxay kuu ogolaanayaan inaad ku ciyaarto xitaa miisaaniyad yar - 10 USD, 10 EUR, 0.05 BCH, 4400 DOGE, 0.025 ETH, 0.001 BTC, 0.02 LTC, 102 NOK, 15 CAD, 15 AUD, 16 NZD, PLN 45, JPY 1285, ZAR 175.
Liiska nidaamyada lacag-bixinta ee bixitaanka ayaa la mid ah xulashooyinka dhigaalka. Lacagaha waxaa lagu bixiyaa 12-72 saacadood gudahood, iyadoo kuxiran lacagta iyo nidaamka lacag bixinta. Xadka ugu yar ee bixitaanku wuxuu 2 jeer ka sarreeyaa lacagta dhigaalka.
Si aad lacag ugala soo baxdo koontada, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso dhammaan shuruudaha gunnada (haddii ciyaaryahanka uu ka qaybqaato dallacaadda), u mar nidaamka xaqiijinta.
Buugga khamaarka ee FastPay wuxuu bixiyaa in ka badan 2 kun oo kulan dhadhan kasta. Boggu wuxuu leeyahay boosas iyo jaangooyooyin ka kooban in ka badan 30 adeeg bixiyeyaal:
PlaySon, Relax, Igrosoft, Microgaming, iwm.
Khamaarka wuxuu ku takhasusay boosaska cusub - ma jiro mashiinno dib-u-habeyn leh oo muuqaallo duugoobay laga sameeyay. Buug-yaraha waxaa ku jira mashiinno naadi ah oo leh 3 iyo 5 duntu, 5 ama khadad lacag-bixinno ka badan. Afyare kastaa wuxuu leeyahay mawduuc u gaar ah, kaas oo loogu talagalay naqshadeynta, walxaha ciyaarta, codka dhawaaqa.
Qaybaha"Iibso Muuqaal" iyo"Bitcoin, ETH, LTC" waxay mudan yihiin fiiro gaar ah. Qaybta koowaad waxay ka kooban tahay mashiinno naadi ah oo aad ka iibsan karto wareegyo gunno ah, qaybta labaad waxay soo bandhigaysaa boosasyo leh sharadyo qaab cryptocurrency ah. Qaar ka mid ah mashiinnada ku jira FastPay waxaa ku jira jaakbotyo.
Kasiinadu waxay bixisaa noocyo kala duwan oo roulettes ah - Mareykan, Noorwiiji, gawaarida gawaarida, iwm. Kooxdan cayaaraha waxaa matalaya bixiyaha Evolution. Ciyaaryahanku wuxuu dooran karaa miis habboon oo ku saleysan dookhaaga shaqsiyeed iyo xadkiisa.
Barnaamijka gunnada casino waxaa matalaya dalabyada soo socda:
Gunnada macaamiisha cusub. Waxaa loo tiriyaa deebaajiga koowaad iyo labaad ee FastPay. On deebaajiga ugu horeeya, ciyaaryahanka helo lacag gunno iyo free Lataliyihii, on labaad - kaliya lacag gunno. Xaddiga saxda ah ee gunnada waxaa lagu go'aamiyaa cabbirka dhigaalka. Qaddarka ugu badan ee gunnada koowaad waa 865 NOR, 100 USD/EUR, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44000 DOGE, 127 CAD, 130 AUD, 0.01 BTC, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN ... Cabbirka labaad waa 2 jeer ka yar. Waxaad isticmaali kartaa dalabka soo dhaweynta hal mar oo keli ah.
Nidaamka daacadnimada. Waxay ka kooban tahay heerar - si aad u gaarto mid kasta oo aad u baahan tahay si aad u ururiso dhibcaha xaaladda. Waxaa loo tiriyaa khamaarista mashiinnada ciyaarta iyo cayaaraha kale. Nidaamka daacadnimada wuxuu saameeyaa tirada gunooyinka la heli karo. Si loo gaaro heer cusub, ciyaaryahanka wuxuu helayaa 15 ilaa 500 wareeg oo bilaash ah.
Fastpay waa mashruuc xiiso leh oo ay tahay in laga fiirsado dhamaan taageerayaasha khamaarka. Kasiinadu waxay bixisaa wax kasta oo aad u baahan tahay wakhti xiiso leh, oo lagu dhex galo adduunka khamaarka. Ciyaartoydu waxay filayaan madadaalo tayo sare leh oo khamaar ah, lacag bixin dhakhso leh, degel ku habboon, tiro badan oo gunooyin ah iyo barnaamij daacadnimo faa'iido leh. Shardiga kaliya ee jira ayaa ah in dadka waaweyn ay kaliya iska qori karaan goobta.